‪#‎OromoProtests‬ ODUU GADDAA: Ibsaa Adam kan dheengaddaa Harargee Bahaa Aanaa Gurawaa magaalaa Doguu keessatti rasaan dhahamee ture har’a lubbuun dabartee jirti. – Welcome to bilisummaa
‪#‎OromoProtests‬ ODUU GADDAA: Ibsaa Adam kan dheengaddaa Harargee Bahaa Aanaa Gurawaa magaalaa Doguu keessatti rasaan dhahamee ture har’a lubbuun dabartee jirti.
bilisummaa July 27, 2016	1 Comment
Ibsaan baranuma Yunivarsitii Adaamaa irraa kan eebbifame yoo ta’u eddoo dhalootaa isaatti deebi’ee osoo cidha hiriyaa irraa jiru, loltoonni dhukaasa bananii isaafi namoota jaha kan biroo madeessan. namoota san keessaa shamarree Rihaanaa Ahmad bakkumatti yennaa wareegamtu, Ibsaafi kan hafan shanan gara Hospitaala Gaara Mul’ataa geeffamanii turan. Ibsaan madaa isatirraa fayyisuun dadhabamee guyyaa har’aa lubbuun baatee jirti. Rabbiin gootota keenya hafan waliin jannataan haa qananiisu jenna. Maatiif firoota isaatiif jajjabina hawwina.
Previous ‪#‎OromoRevolution‬ Worraaqsi Bilisummaa Oromiyaa Waliin Gaye !
Next The TPLF Criminal Junta Is Committing Open Mass Murder In Oromia!
Abdirahman A S Ali
Maatii isaa rabbi has jajjabeessu isallee jannataan haa qananiisu, duuti isaa bilaash hin taane Oromo rabbi waltaasisee qabsoo bilisummaa irratti haa bobbaasu
Leave a Reply to Abdirahman A S Ali Cancel reply